Muvhuro, 18 Gumiguru 2021
"Muite sevacheche vachangozvarwa. Mufarire Shoko raMwari. Kuti mugokura. Shoko iri ndiwo mukaka wenyu. Mukaka usina kushatiswa" (1 Pita 2 ndima 2)
Chinhu chose chinofanira kuva nenheyo yakasimba. Ndiko kuti chigone kumira. Ndizvovo zvinofanira kuita Mukristu. Anofanira kuva nenheyo yakanaka. Nheyo yacho inofanira kunge iri yeShoko raMwari. Inofanira kunge iri yetsika dzaMuponesi. Saka anofanira kudya Shoko raMwari. Anofanira kuridya semunhu ane nzara yakawanda. Uye Shoko iri rinofanira kunge rakajeka. Ndiko kuti mweya wake ukure. Shoko raMwari ndiro roga rinokudza mweya wemunhu.
Mukristu anofanira kukura. Ndizvo zvinosimbiswa neMagwaro. Asi anofanira kutanga anzwisisa dzidziso dzekutanga dzacho. Ruka anotaura pamusoro paPauro. Anoti Pauro ane vanhu vaakambodzidzisa Shoko raMwari. Vanhu ava vakanga vachangoponeswa. Akatora vanhu ava. Ndokuenda navo pane chimwe chikoro. Chikoro ichi chakanga chiri chaTiranasi. Pauro akadzidzisa vanhu ava Shoko raMwari. Aivadzidzisa zuva rimwe nerimwe. Akaita makore maviri achivadzidzisa kudai. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Mabasa 19 ndima 1 kusvika 10.
Pauro akanga aine vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vacho vakanga vachangoponeswa. Vamwe vakanga vava kuziva zvakawanda. Asi akapa mweya yevanhu vose ava nheyo yakanaka. Asi haufaniri kungova nenheyo chete. Unofanira kudzidzavo zvepamusoro. Ndizvo zvatinovona muna Vahebheru 6 ndima 1 kusvika 3. Inoti, "Saka ngatimbosiya dzidziso dzekuvamba. DzaMuponesi. Timbotaura zvevakura. Vabva zera. Tisadzokorora kudzidzisa nezvekutendeuka kubva pamabasa akafa. Nekuvimba naMwari. Nedzidziso yekunyikwa. Kana yekuturika mavoko. Kana yekumuka kubva kuvakafa. Kana yemutongo waMwari uya. Uchazovhara matare ose. Izvo tichazvitaura hedu. Kana Mwari vakatitendera".
Zvinhu zvose izvi zvinodiwa. Ndizvo zvinoita kuti Mukristu ave nenheyo yakasimba. Agogona kurarama hupenyu hweChikristu hunofadza. Achishumira Mwari zvakazara.
Jesu vakambotaura nezvenheyo yakanaka. Mashoko avo aya akadzama chose. Unofanira kugara uchiafungisisa. Tinoaverenga muna Matiyo 7 ndima 24 kusvika 27. Vakati, "Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa, akaaita, ungafananidzwa nomurume wakachenjera. Murume uyu wakavaka imba yake paruware. Mvura yakabva yanaya. Yakanaya yakawanda zvikuru. Mitutu ikavhuvhuta. Ikarova imba iyi. Asi imba iyi haina kuwa. Nokuti yakanga yakavakirwa paruware. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa, akasaaita, ungafananidzwa nomurume benzi. Murume uyu wakavaka imba yake pajecha. Mvura yakabva yanaya. Yakanaya yakawanda zvikuru. Mitutu ikavhuvhuta. Ikarova imba iyi. Imba iya yakabva yawira pasi. Yakawa zvekusara yaparara yose".
Baba vandinoda. Ndakazvipira kwamuri chose. Ndakazvipiravo kushoko renyasha dzenyu. Iro rinogona kundivaka. Nekundibatsira kushandisa fuma yangu. Iyo fuma iya iri muna Muponesi. Ndakavakwa panheyo yakasimba. Nheyo iyi yakavakwa neShoko raMwari. Shoko iri riri kuita kuti mweya wangu ukure. Ndinogara ndichiwedzera kufanana naMwari. Zvichiita kuti ndigone kurarama hupenyu hwamakandirongera. Muzita raJesu. Ameni.
1 Vakorinde 3 ndima 2
Vahebheru 5 ndima 12-14